Ogaden News Agency (ONA) – Maxaa lagaga hadlay shirkii Xuquuqda Aadanaha iyo Xoriyadda Saxaafadda
Maxaa lagaga hadlay shirkii Xuquuqda Aadanaha iyo Xoriyadda Saxaafadda
Posted by ONA Admin	/ November 14, 2012
Waxaa lagu qabtay dalka Sweden shirku lagaga hadlayay xuquuqul insaanka iyo xoriyadda saxaafadda oy soo diyaariyeen hayado fara badan oo isu tagay. Waxaa garab socday shirka seminaaro fara badan oo dhamaantood ku saabsanaa xuquuqul insaanka, waxaana warbixino laga bixinayay wadamo dhowr ah oo laga hadlayay arimaha ka jira ee xuquuqda aadanaha ku saabsan sida dalalka Carabta, Afrika iyo Hindiya.
Waxaa ka mid ahaa dadka bixinayay seminaarka halgame Cabdulaahi Xuseen oo maalinkii shalay ahaa bixiyay dhowr seminar oo saacado qaatay. Arimaha uu ka hadlay mudane Cabdulaahu Xuseen waxaa ka mid ahaa galinkii horee shalay seminaar ku saabsanaa xaalada dhabta ah ee xuquuqul insaanka ee ka jira wadanka Ogadenya. Siminaarkaa oo si cilmiyaysan uu u soo diyaariyay oo watay sawiro iyo filimaan muujinaya heerka ku tumashada xuquuqda dadweynaha Ogadenya ayuu markuu dhameeya su’aalo ayaa laga waydiiyay halkaas. Su’aalihii ku saabsanaa arimahaa oo inta badan ay weydiinayeen wariyayaal ayuu uga jawaabay Cabdulaahi Xuseen.
Galinkii danbe oo la’isugu soo noqday barnamij ka ayaa furmay 4tii galabnimo wuxuuna ku saabsanaa dood kooxeed -panal discution- lagu qabtay congress hallka wayn ee magaalada Gothenburg ee caasimada labaad ee dalka Sweden, waxaana kasoo qayb galay dhamaan hayadaha xuquuqul insaanka ee ka jira Sweden sida Amnesty International, Swedish Human Rights iyo kuwo kale oo badan. Waxaa kale oo kasoo qayb galay madax sare oo ka kala socotay dawladaSwedeniyo xisbiyada siyaasadeed ee ka jira wadankaSweden.
Waxaa madaxdaas ka mid ahaa mayor ku xigeenka caasimada Gothenburg. Dooda (panel discussion) ayaa waxaa ka qayb qaadanayay sadex ruux oo uu Cabdulaahi Xuseen ka mid ahaa oo ka socday Ogadenya. Waxay labada kale kala ahaayeen Maryam oo ka socotay dalka Bahrain iyo Abdul oo ka socday dalka Algeria. Maryam oo Bahrain-iyad ahayd ayaa dhawaan wadanka Sweden lagu gudoonsiiyay shahaado sharaf ku aadan sidii ay uga dhiidhiday ku tumashada xuquuqul insaanka wadankeeda.
Su’aalo badan ayaa loo soo jeedinayay sadexdooda iyadoo qofwalbaana uu jawaabtiisa ku salaynayay xaalada wadankiisa. Waxaana halkaas, oo ay dad badan oo hayado Swedish ah iyo kuwo dawli ahba isugu jiraa ay dadkii ku fahmeen dhibaatooyinka qarsoon iyo ku-tumashada xasuuqda qarsoon ee ka jira wadanka Ogadenia oo uu mudane Cabdulaahi si qoto dheer u faahfaahiyay aadna u sharaxay.
Waxyaabaha sida aadka loo danaynayay ayaa ahayd Cabdulaahi Xuseen oo si fiican uga faaloonayay waxyaabo aad u farabadan oo ka dhacay wadanka Ogadenia oo goobjoog uu ka ahaa, balse nasiib daro aanay dunidu ka warhayn maadaama ayuu yidhi ay Ogadenia ka jirto xayiraad saxaafadeed (media ban) iyo mid aadminmo (humanitarian blockade) oo sanadkii 2007 wadanka uu gumaysigu kasoo eryay ICRC iyo Doctors Without Borders.
Waxyaabaha uu mudane Cabdulaahi labadaas meelmoodba ku faahfaahiyay waxaa kamid ahaa kufsiga, dilka, xasuuqa qarsoon iyo horumar la’aanta ka jirta dhulka Ogaadeeniya wuxuuna cadeeyay maleeshiyaadka loo yaqaano liyuu boolisku inay yihiin ujeedo ay Itoobiya ku damacsanayd inay ugu xilqariso ciidankeeda isla markaana ay hadhaw dhahdo kuwan ayaa dambiga waday waana xidhnay si ay shaqadii ay rabeena loogu qabto ciidankoodana u badbaadsadaan.